fantsona telegram an'ny magazine "Potato System" - magazine "Potato System"
Tena Label fantsona telegram an'ny gazety "Potato System"
Label: fantsona telegram an'ny gazety "Potato System"
Attention! Hotanterahina ny 6 desambra izao ny fivorian’ny « oran’ny sendikan’ny ovy ».
Nahemotra amin'ny 6 Desambra ny fivoriana faharoa nokasain'ireo manampahaizana ao amin'ny Vondrona Potato miaraka amin'ireo mpamboly ovy eo amin'ny toerana misy ny fantsona telegrama an'ny gazetiboky "Potato System". Ny fiandohan’ny hetsika...
Ora Union ovy
Manokatra andian-dresaka miaraka amin'ireo mpamboly ovy ao amin'ny tranokalan'ny fantsona Telegram Agronomia ny Union Union. Ny fihaonana dia natokana ho an'ny fifanakalozan-kevitra momba ny olana eo amin'ny indostria, ary ny tsirairay ...
Miarahaba anao fatratra amin'ny faran'ny taona 2020 izahay! Nivadika ho lava io, ary mazava ho azy fa tsy izany velively ...
Andao hiresaka momba ny fambolena sy ny fitehirizana legioma borsch napetraka
Ny magazine "Potato System" dia manana vondrona vaovao amin'ny telegram - "Agronomy (borscht set)". Ity sehatra ity dia natao hiresaka olana mifandraika amin'ny ...
Manasa anao izahay hiady hevitra momba ny olan'ny fambolena sy fitehirizana tongolo! Vondrona magazine vaovao ao Telegram
Mivelatra ny vondrom-piarahamonin'ny telegram amin'ny gazety Potato System! Vao tsy ela akory izay, araka ny fangatahan'ny mpandray anjara, dia nisy vondrona iray hafa natsangana hiresaka momba ny fambolena sy fitehirizana tongolo. Fitsarana ...
Fanontaniana tsy mandeha amin'ny laoniny momba ny ovy maniry
Ny magazine Potato System dia manasa ireo mpandray anjara amin'ny tsena liana handray anjara amin'ny adihevitra momba ny olan'ny fambolena ovy indostrialy. Lahateny misy fiaraha-midinika "Fanontaniana ho azy🙂" amin'ny ...
"Rafitra". Mitondra matihanina izahay avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao
Navoaka hatramin'ny 2009 ny magazine Potato System. Tamin'ny volana febroary 2020, nanao dingana mahery tamin'ny habaka Internet ny gazety: nandefa maoderina vaovao ...
Lazao ahy momba ny orinasanao
Ny antson'ny magazine "Potato System" (navoaka tao amin'ny fantsom-pifandraisan-davitra t.me/potatorus) hanoratra tantara kely momba ny orinasan'izy ireo dia novalian'ny orinasam-pambolena "Razdolye" avy amin'ny faritra Moskoa. AO ...
Hahazo tavy 42 tapitrisa robles ho an'ny voly ovy sy Pancake herinandro ny tantsaha any amin'ny faritra atsimo atsimo
Tany amin'ny faritra Nizhny Novgorod dia nihena ny vidin'ny ovy